नायिका पूजा शर्माले पीडितको घरघरमै पुगेर राहत बाडिन् [हेर्नुहोस पुरा विवरण] - Mitho Khabar
नायिका पूजा शर्माले पीडितको घरघरमै पुगेर राहत बाडिन् [हेर्नुहोस पुरा विवरण]
April 12, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नायिका पूजा शर्माले पीडितको घरघरमै पुगेर राहत बाडिन् [हेर्नुहोस पुरा विवरण]
काठमाडौं / विश्व कोरोना भाइरसको मारमा रहेको छ । विश्वका अधिकांश देश लकडाउनमा रहेका छन् । नेपाल पनि विगत दुइ हप्ता भन्दा लामो समयबाट लकडाउनमा रहेको छ। यो लकडाउन अझ लामो समय चल्ने पक्का जस्तै रहेको छ। बैशाख ३ गतेसम्म घोषित लकडाउन भैसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको आफ्नो सम्बोधनमा अझै दुई साता हाम्रो लागि अप्ठ्यारो स्थिति रहेको बताईसकेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष मारमा दिनहु ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग परेको छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ। विशेष गरि चलचित्रमा काम गर्ने धेरै प्रावधिकहरु यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।
सोहि कारण धेरै कलाकारले चलचित्र प्राविधिक संघ मार्फत सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुस्कर लामाले सहयोग रकम जुट्ने क्रम जारि रहेको बताएका छन्। अभिनेत्री पूजा शर्माले केहि दिन अगाडी दुईलाख भन्दा बढीको खाद्यान्न प्राविधिकलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।
सोहि घोषणा उनले पूरा गरेकी छिन्। उनले ३० जना प्राविधिकलाई प्रति व्यक्ति १ बोरा चामल, २ केजी नुन, २ लिटर तेल, दाल, केराउ, १ केजी चिनी, विस्कुट, १० प्याकेट चाउचाउ, साबुन र स्याबिन वितरण गरेकी छिन्। प्राविधिकको सहजताका लागी उनि घर-घरमा पुगेकी थिइन्। जोरपाटी देखि भक्तपुर ‘व्यासी’ सम्म उनि राहत लिएर पुगेकी थिइन्।
उनको साथमा प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुस्कर लामा, संघका उपाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पोखरेल, पूर्व महासचिव सुरज आचार्य लगायत रहेका थिए। राहत वितरण गर्दै पूजाले आफुले सक्ने र आवश्यक परेका व्यक्तिलाई थोरै सहयोग गर्न पाउदा सन्तुष्टि मिलेको बताएकी छिन्। उनले जतिलाई सहयोग गर्न सके उहाहरुलाइ गुणस्तरीय खाद्यान्न वितारण गर्न सकेकोमा खुसि मिलेको बताएकी छिन्। हरेकलाई सचेत हुन र आफ्नो र आफ्नाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै घरै बस्न अनुरोध गरेकी छिन्। क्यानड नेपाल
उनले भनिन्-नायिकाहरु फिट रहन नसकेर चाडै नै नायिकाको भूमिकाबाट आमा र आन्टीको भूमिकामा देखिन्छन् । म आन्टी भएर हराउदिन । नायिका रेखा थापालाई हराउन दिन्न । उनले आफूले लापरवाही गरेका कारण पनि मेन्टेन गर्न नसकेको बताएकी छिन् । आफ्नो शरीर यो बर्षको फागू पूणिर्मा सम्ममा पुरै फेरिने रेखाको दाबी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस: क्यान्सरलाई जितेकी मनीषा कोइरालाले दिइन् क्यान्सरबाट जोगिने यस्ता टिप्स…शेयर गर्नुहोस……म चिकित्सक होइन, तर म केही अवश्य भन्न सक्छु। भन्छन् नि, ‘रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेस।’ भरसक हामी सचेत हुनुपर्छ कि हामीलाई क्यान्सर नलागोस्। त्यसको लागि रोग निरोधक जीवनशैली अपनाउन नै आवश्यक छ। मलाई आफ्नो अनुभवले पनि केही कुरा सिकाएको छ।मैले जोड दिएको कुरा के हो भने, रोग लागेर उपचार गरिसकेपछिको जीवनमा फेरि पनि त्यो रोग फर्केर नआओस् भन्नको लागि मैले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप हो। मैले अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले भन्ने गरेको ‘हेल्दी लाइभस्टाइल’ को बारेमा म बोलिहाल्छु।
मलाई नै लाग्छ- म क्यान्सर अगाडिको जीवन भन्दा अहिले उत्तम जीवन जिउँछु। पीडा भइसकेको मान्छेले, भोगेको मान्छेले सचेत भएर जीवन जिउँछ। पीडामा नभएको र दुख नउठाएको मान्छेले अलिकति लापरवाह जीवनशैली जीउने रहेछ। क्यान्सरले मलाई स्वस्थ्य जीवन जीउनु अति आवश्यक रहेछ भन्ने बोध गरायो र जीवनलाई रमाएर जिउन सिकायो।हामी जति बाँच्छौ, किन खुसी हुन सक्दैनौँ? हामी एकपल्ट जाने नै हो नि। हामीलाई दुखी बनाउने कुरालाई किन छोड्न सक्दैनौँ र हाम्रो सकारात्मक सोचलाई हामी किन अरुसँग बाँड्न सक्दैनौँ ? मलाई के लाग्छ भने एउटा सुखी र स्वस्थ्य मान्छेले अरुलाई पनि केही योगदान गर्न सक्छ।
हामी यस्तो जीवनलाई डोर्‍याइरहेकोमा खुसी हुनुपर्छ। गएको तीन वर्षदेखि हामी एक समूह बनेका छौँ, यो समूहले सेप्टेम्बर महिनालाई डिम्बासयको क्यान्सर विरुद्ध जनचेतना जगाउने महिनाको रुपमा मनाउन थालेको छ। विश्वका अरु देशमा जस्तै नेपालमा पनि तीन वर्षदेखि हामी डिम्बासयको क्यान्सर विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका हौँ।यो अभियानमा मलाई क्यान्सर केयर नेपालले एकदमै सहयोग गरेको छ। उहाँहरुलाई भेट्ने बित्तिकै मलाई काम गर्न मन लाग्यो। उहाँहरु धेरै मेहनती हुनुहुन्छ र समाजको लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ पनि। उहाँहरुसँग काम गर्न पाउनु गर्वको कुरा हो।
यो पनि पढ्नुहोस: जब चर्चित नायिका करिश्मा पहिलो पटक परीक्षा हल पुगिन्……अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर १४ वर्षकी थिइन्। जतिबेला उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पहिलोपल्ट प्रवेश गरिन्। एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै फिल्म जगतमा चम्किएकी करिश्माको लोक्रप्रियता मोहलाग्दो थियो।जीवनको लामो संघषर्बाट आफूलाई स्थापित गरेकी करिश्मालाई त्यो लोकप्रियताले खुसी दिन सकेन।
कोरोना भाइरसः यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सुरक्षित छ ? थाहा पाईराख्नुस
लकडाउनमा यी चर्चित अभिनेत्रीले यस्तो गर्न भिडियो मा सिकाउदै [हेर्नुहोस पुरा विवरण]